Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/16 Febroary 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/16 Febroary 2013
nankafizy (nitranga in-1) : Notanterahina omaly teny amin'ny foiben- toeran'ny Telma teny Alarobia ny fanolorana ny loka ho an-dRavelonarivo Tsitohery sy Randrianarijaona Anjasoa, izay nampiseho sary nankafizin'ny mpitsidika ny kaonty Facebook-n' ny ny Telma. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
nijoroan' (nitranga in-1) : Ny taona 1983 no nanombohan' ny sehatra raha dimy taona talohan'io no nijoroan'ny sekoly. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
Androhibe (nitranga in-1) : Tonga nidodododo nitsapa alahelo teny Androhibe, trano misy ny vatana mangatsiakan'ilay kaomandà, kosa omaly antoandro ireo manambonina-hitra maro teo anivon' ny Foloalindahy. (Kaomandà – « Mety ho olona mahafantatra ihany no nahavanon-doza »)
Nahatratra (nitranga in-1) : Nahatratra 2 166 ny «j'aime» tamin'ny sarin'izy roa raha 8 962 no fitambaran'ireo naneho ny safidiny. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
Tafaray (nitranga in-1) : FTA Foot Anjanahary # AS Tafaray Mandroseza. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
tarehimarika (nitranga in-1) : Mano-didina ny 3 000 eo mazàna io tarehimarika io ho an'ireo fonja manerana ny Nosy. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
Afak' (nitranga in-1) : Afak'omaly no efa nivory tao Ihosy mahakasika ny fandaminana asa rehetra hatao amin'ny ady amin'ny asan-dahalo ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
nandraisan' (nitranga in-1) : Toa elaela izay tsy nandraisan'i Madagasikara lalao baolina kitra iraisam-pirenena izay, na nandrenesan'ny ekipantsika tany Afrika tany. (Baolina mamono tena)
LiveJournal (nitranga in-1) : Ny maraimbe ary dia efa namoaka [ru] ango-tsary tao amin'ny bolongana LiveJournal ilay mpibilaogintsary malaza Ilya Varlamov. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Facebook (nitranga in-1) : Mitaraina amin'ny toerana misy ny firenena ny mpanao gazety Dmitri Olshansky, tamin'ny fanoratana [ru] tao amin'ny Facebook, ho ”mahantra, Rosia mahantra, zavatra iray hatrany,” raha miresaka amin'ilay tatitra [ru] nataon'i Lenta. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
mpifanandrina (nitranga in-1) : Ny antsika toa tsy mba izay hahafaty any amin'ny haraton'ny mpifanandrina no atao fa miverin-dalana mamono baolina aty amin'ny haraton'ny tena indray. (Baolina mamono tena)
renana (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
Nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fana- renana ny ivon-toeran' ny raki-tantara sy ny fanitarana ny Lycée teknika ao Moramanga ny tetikasa Ambatovy. (Tapatapany)
Anjanahary (nitranga in-1) : FTA Foot Anjanahary # AS Tafaray Mandroseza. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Rosiana—hita (nitranga in-1) : Ny hatsikana momba an'i Chelyabinsk [ru] no manjaka indrindra eo amin'ny tontolon'ny hatsika Rosiana—hita ao amin'ny sombim-pandaharan'i Ivan Dulin ao amin'ny fahitalavitra Nasha Rosia [ru]. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hanaovana (nitranga in-5) : «Hampitoviana amin'ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny izy ity, ka ny maraina no hanaovana ny dingan'ny fifanintsanana raha ny hariva kosa no hanatontosana ireo dingan'ny famaranana», hoy i Richard Randrianandraina, filohan'ny federasiona malagasin'ny lomano. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
facebook (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Veduta (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
fikoloana (nitranga in-1) : Eo ihany koa ny fiarovana sy fikoloana ny tontolo iainana. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
DREAM (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Hanitry (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina/Haja Randrianatoandro. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Reboza (nitranga in-1) : Nampiato ny minisitry ny Rano Reboza Julien tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Psdum intsony ireo mpikatroka politika sasany miara-dia amin'i Lahini-riko Jean, izay ao anatin' ity antoko ity ihany. (Sombiny)
narantsoa (nitranga in-1) : omaly no nivory tany Fia- narantsoa nampahafantatra ny kandidà hotohanany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena ireo zanaky ny faritra Atsimo avy any Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Anosy ary i Menabe. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
hahita (nitranga in-1) : hahita ny tena lalao ny mpitia baskety manomboka anio
Hitohy anio eny Andraisoro ny Fety de baskety. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Kevin (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
Ramaroson (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
hisentoana (nitranga in-1) : mba hoentina hisentoana hiainana baolina kitra malagasy indray ity faran'ny herinandro ity. (Baolina mamono tena)
метеорита (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
Esplanade (nitranga in-1) : Eny amin'ny Esplanade Analakely sy eny amin'ny Glacier no tena fanaovan'izy ireto ny asa ratsiny, ary efa indroa na intelo no nigadra ny sasany tamin'izy ireto”, hoy ny tatitra voaray teo anivon'ny polisim-pirenena. (Analakely – 12 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpanendaka)
Giovanna (nitranga in-3) : isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna sy Irina i Brickaville
Mbola an-dalana amin' ny fanamarinana ireo fahasimbana nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza Irina sy Giovanna tamin' ny volana febroary 2012 ny distrikan'i Brickaville. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
hamboly (nitranga in-1) : Henika ny mpiasan'ny Cua ny vahilavan'ny farihy Masay hatrany amin'ny manodidina ny zaridaina mba hamboly izany hazo izany. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
fahatakarana (nitranga in-1) : Noho ny fahatakarana ny natioran'ilay sombin-tantara sy ny fandehan'ny resaka, misy ny mpisera Twitter manely ny fomba filaza ho tahaka izao:
Челябинский дождь настолько суров… #метеорит Mafy tokoa ny orana ao Chelyabinsk … #meteorite [tainkintana] Misy koa ireo olona fanta-daza sasany mihasahisahy kokoa amin'ny fihevahevana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
наблюдали (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
talen' (nitranga in-2) : ny talen'ny CFP Ampasampito, Razaimanahirana Honorine
Noheverina ho asa fanaon'ny lehilahy ny asam-pirinty. (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
Ivato (nitranga in-2) : Omaly tolakandro vao nigadona teny amin' ny seranam-piaramanidina Ivato, izay fotoana tokony hisian'ny sidina mankany Mahajanga saika handehanany izy ireo. (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
Fort (nitranga in-1) : Pacific Fort Duchesne # Pro Antsahameva. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
solontenan' (nitranga in-1) : Hisy araka izany ny komity hatsangana ahitana ny solontenan'ireo mpikaroka, ny avy amin'ny minisiteran' ny Kolontsaina sy ny vakoka, ny minisiteran'ny Tontolo iainana ary ny minisiteran'ny Harena an-kibon'ny tany, mba handinika ireo volavolan-kevitra nitsiry tamin'ity fihaonana ity. (Fikarohana – Hatsangana ny komity momba ireo vakoka ambanin’ny tany)
nigadona (nitranga in-1) : Omaly tolakandro vao nigadona teny amin' ny seranam-piaramanidina Ivato, izay fotoana tokony hisian'ny sidina mankany Mahajanga saika handehanany izy ireo. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
hoentina (nitranga in-1) : mba hoentina hisentoana hiainana baolina kitra malagasy indray ity faran'ny herinandro ity. (Baolina mamono tena)
Alexey (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
Razafindravahy (nitranga in-2) : sady fanentanana ny olona no fiarovana ny tontolo iainana izao fihetsika asehon'ny Pds Edgard Razafindravahy izao
Soa fianatra. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
Dominique (nitranga in-1) : Samy naneho ny fahavononany hampi- akatra ny taranja na i Norolalao Ramanantsoa, izay filoha vonjimaika amin'izao fotoana izao, sy Dominique Raherison filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha. (Tapatapany)
tompondakan' (nitranga in-1) : anio sy rahampitso no hanatontosana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny taranja lomano eo amina dobo filomanosana mirefy 25 metatra. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
Côte (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
Noho ny fahatarana tamin'ny fahatongavan'ny delegasiona swazis teto an-drenivohitra, izay hifanandrina amin'ny Terrible de la Côte Ouest (TCO), dia voatery nandeha fiarakodia izy ireo hamonjy an'i Mahajanga, hanaovana ny lalao ao amin'ny kianja Rabemananjara rahampitso. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Ilya (nitranga in-1) : Ny maraimbe ary dia efa namoaka [ru] ango-tsary tao amin'ny bolongana LiveJournal ilay mpibilaogintsary malaza Ilya Varlamov. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nampiasa (nitranga in-2) : Ankoatra izany rehetra izany, nampiasa dia nampiasa ny dikantsarin'ny Adobe photoshop (mety ho nopiratena) ny mpiseran'ny RuNet ary namorona sary namboamboarina maro, na “fotozhaba” (ara-bakinteny “sary-sahona”) esoeson-tsarin'ny tainkintana nandritra ny famakivakiany ny lanitr'i Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
machismo (nitranga in-1) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Rasolojaona (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
môtô (nitranga in-1) : Lasa nitsoaka avy hatrany tamin'ny môtô avy eo ireo mpangalatra rehefa avy nahazo ilay vola. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Nitondra (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
vinan' (nitranga in-1) : Mitombina hatrany hatreto ny vinan'ny mpamantatra ny toetr'andro ny mety hivadihan'ilay andian-drahona arahi-maso ao amin'ny lakandranon' i Mozambika ho rivo-doza afaka iray na roa andro. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
nianjeran' (nitranga in-1) : Amin'izao fotoana [15 feb] izao dia mbola mitady [ru] izay toerana nianjeran'ilay tainkintana ny fitondram-panjakana Rosiana, fa ny zavatra azo antoka dia niteraka feo malaky dia malaky niteraka fahavakisam-baravaram-pitaratra sy zavatra hafa izany. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
anatiny (nitranga in-1) : « Afaka mitifitra ihany anefa ny olona ao anatiny, raha tena voamarina fa olon- dratsy ireo olona hitany avy eny ambony. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
nanenjehana (nitranga in-1) : efa nanenjehana dahalo tany Betroka tamin'ny hetsika Tandroka voalohany ny helikoptera
Efa tonga any Betroka omaly tokony ho tamin'ny 1 ora anto-andro ny helikoptera hanam- piana ireo mpitandro ny fila- minana amin'ny fanenjehana ireo dahalo any amin' iny faritra atsimon'ny Nosy iny. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Papmad (nitranga in-2) : Taorian'io fivoriana io dia ny Filoha tale jeneralin'ny orinasa Papmad, Patrick Rajaonary no heverin' izy ireo fa tsara toerana indrindra, afaka hisedra ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
Жители (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
Angry (nitranga in-2) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Hiasa (nitranga in-2) : Hiasa iray volana
« Hiasa mandritra ny iray volana any Atsimo io heli- koptera io. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
hanatanterahana (nitranga in-1) : “Asa hanatanterahana ny tontolo maitso no tanjona. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
nanaovana (nitranga in-1) : Ilay fanampiana mitentina 1 tapitrisa dôlara vita sonia teo amin'ny minisiteran' ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola, ny Banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana (Bad) sy ny Unicef ny volana aogositra 2012 lasa iny no nanaovana ny asa. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
Rajaonary (nitranga in-1) : Taorian'io fivoriana io dia ny Filoha tale jeneralin'ny orinasa Papmad, Patrick Rajaonary no heverin' izy ireo fa tsara toerana indrindra, afaka hisedra ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
hampiroboroboana (nitranga in-1) : Tanjon'ny CRM ny hampiroboroboana ny fahaizana, ny fianarana, ny filalaovana mozika, hitady izay mety hanohizana azy hatrany amin'ny ambaratonga ambony. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
nentina (nitranga in-1) : Ilay naratra kosa avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Fiteramana (nitranga in-1) : ireto indray ny tohin' ny fandaharan-dalao ho an'ny «Tournoi Mazaka», lalao baolina kitra an'olona fito karakarain'ny Fiteramana etsy aminny kianjam-pasika Fort-Duchesne ho an'ny rahampitso alahady. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
lefitry (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
hotanterahiny (nitranga in-1) : Ka raha ny fanda- minana napetraka dia efatra ora ny fitambaran'ny sidina hotanterahiny ao anatin'ny iray andro. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Fiara (nitranga in-1) : Fiara iray 4L no nitondra azy, ka raha vao tafiditra izy dia niditra ihany koa ireo jiolahy sady naka ilay sakaosy feno vola », hoy ny nambaran'ny olona iray mivarotra eo amin'ny manodidina. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Star (nitranga in-2) : Black Star Betongolo # As Santos. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
lahatsary (nitranga in-1) : Heniky ny mpankafy lahatsary ihany koa ny YouTube. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
distrika (nitranga in-1) : Ireto farany izay mihevitra fa tokony hiorina amin'ny soson-kevitra avy amin'ireo Filoham-pokontany sy ny Lehiben'ny distrika ny fandra- fetana ny Lalàm-panorenana hampiharina amin'ny Repo-blika faha-IV. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
COMORE (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
mora (nitranga in-1) : Raha ny fahitan'ny eo anivon' ny sampana manara-maso ny vary dia noho ny fiparitahan'ny « vary mora » any amin'ny faritra no mahatonga izany. (Tapatapany)
hisongadinantsika (nitranga in-1) : Raha mbola mihemotra tahaka izao ny fahafantaran'ny teratany ny momba ny baolina kitrany, tsy ho azo eritreretina ny hisongadinantsika amin'ny sehatra kaontinantaly, na ho an' ireo klioba na ho an'ny ekipam-pirenena. (Baolina mamono tena)
Nanamarika (nitranga in-1) : Nanamarika ny andron' ny sekoly izy ireo omaly ka nanao fanadiovana faobe. (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
Esca (nitranga in-1) : Mpilomano 300 avy amin'ireo ligim-paritra efatra dia Analamanga, Atsinanana, Boeny ary Vakinankaratra no andrasana handray anjara amin' izany etsy amin'ny Esca Antanimena. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
Raherison (nitranga in-1) : Samy naneho ny fahavononany hampi- akatra ny taranja na i Norolalao Ramanantsoa, izay filoha vonjimaika amin'izao fotoana izao, sy Dominique Raherison filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha. (Tapatapany)
helikoptera (nitranga in-2) : efa nanenjehana dahalo tany Betroka tamin'ny hetsika Tandroka voalohany ny helikoptera
Espace (nitranga in-1) : Feno 30 taona amin'ity taona ity io fampisehoana io, izay homarihina etsy amin' ny Espace Dera Tsiadana rahampitso. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
tanànan' (nitranga in-1) : ny maraimben'ny 15 febroary, dia nandoro ny habakabaky ny tanànan'i Chelyabinsk ary mety ho nidona tamin'ny tany ny tainkintana iray. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Andrianavalona (nitranga in-1) : Ilay naratra kosa avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Dulin (nitranga in-1) : Ny hatsikana momba an'i Chelyabinsk [ru] no manjaka indrindra eo amin'ny tontolon'ny hatsika Rosiana—hita ao amin'ny sombim-pandaharan'i Ivan Dulin ao amin'ny fahitalavitra Nasha Rosia [ru]. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
maheno (nitranga in-1) : manaitra sy mahagaga ihany ny mahita sy maheno fiarakodia arahina mpitandro filaminana mivandravandra amin'ny solomaso mainty toa hanaikitra amin'ny masony ireny eny an-dalana, indrindra mandritra ny fitohanan'ny fifa-moivoizana iny. (Sarotim-boninahitra)
natolotry (nitranga in-2) : Fitaovam-pianarana mitentina Ar 3 685 000 no natolotry ny orinasa Ambatovy ny Club Rotary ao Toamasina ankoatra izay. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
Nahatonga (nitranga in-1) : Nahatonga ny entana nampitondrana azy ihany ny “Sampan-draharahan'ny Paositra Rosiana”. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
1998 (nitranga in-1) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Mangarivotra (nitranga in-2) : FCJ Ankadindramamy # Mangarivotra. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Pacific (nitranga in-1) : Pacific Fort Duchesne # Pro Antsahameva. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Oblast (nitranga in-1) : Nialoha ny filentehan'ny masoandro, nitatitra ny mpitantana ao Chelyabinsk Oblast fa manakaiky [ru] ny arivo ny olona naratra, izay saika avy amin'ny fahavakisam-pitaratra avokoa, ary nahitana ankizy 204 tamin'izany. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hizaràna (nitranga in-1) : Sehatra ihany koa hizaràna ny diplaoma ABRSM 2012 io fotoana io. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
lalahana (nitranga in-1) : Endrika iray entina hana- lalahana ny fonja ny fanalefahan-tsazy. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
nampianjera (nitranga in-1) : Vokatry ny rotsak'orana tsy nety nijanona no an-tony nampianjera ny tranon'ity niharan-doza ity. (Tapatapany)
Avenir (nitranga in-1) : Avenir Ambohimanarina # AS Santos. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
mampanontany (nitranga in-1) : Ny somary mampanontany tena dia «angaha moa tsy maintsy mila ireny feon'anjomara be sy arahina mpitandro filaminana ireny vao fantatra hoe manam- pahefana». (Sarotim-boninahitra)
kaontinantaly (nitranga in-1) : Raha mbola mihemotra tahaka izao ny fahafantaran'ny teratany ny momba ny baolina kitrany, tsy ho azo eritreretina ny hisongadinantsika amin'ny sehatra kaontinantaly, na ho an' ireo klioba na ho an'ny ekipam-pirenena. (Baolina mamono tena)
rosiana (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
Челябинский цинковый завод настолько суров, что берёт руду прямо из космоса Mafy ny vifotsy avoakan'ny orinasan'i Chelyabinsk, mivoaka avy any an-danitra mivantana ny akora avy ao. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
kanetibe (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
Hifampitady eny amin' ny lapan'ny Fanatanjahan- tena Mahamasina anio ireo telo mirahalahy nirotsaka ho filohan'ny federasiona malagasin' ny tsipy kanetibe : Gerard Naturel, filoha amperinasa; Huges Randriamisaina, efa filoha teo aloha; ary i Beryl Razafindrainony. (Tapatapany)
Putin (nitranga in-3) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hahatratra (nitranga in-1) : mety hahatratra 400 eo ireo voafonjan'Antanimora hahazo fanalefahan-tsazy
Tonga teo am-pelantanan'ireo fonja omaly hariva ny taratasy ofisialy mamaritra ireo voafonja nahazo fana-lefahan-tsazy tamin'ny Filo-han'ny tetezamita amin'ity taona 2013 ity. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
voatapaka (nitranga in-1) : Misy soratra mivaky toy izao ihany koa, “Vavaka voatapaka. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
fahatarana (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
Kandidà (nitranga in-1) : MAFANAFANA
Kandidà roa no hifanan- drina amin'ny fifidianana ho filoha hitantana ny federasiona malagasin' ny taranja fototra atletisma anio etsy amin'ny Hotel Panorama. (Tapatapany)
Varlamov (nitranga in-1) : Ny maraimbe ary dia efa namoaka [ru] ango-tsary tao amin'ny bolongana LiveJournal ilay mpibilaogintsary malaza Ilya Varlamov. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
handrafitra (nitranga in-1) : «Mialoha ny hiroso-ana amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka izay handaniana io Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV io dia tokony handrafitra karazana lalàna tovana hifehy ny fitantanana ny firenena ireo mpanao politika», araka ny fanazavan'i Serge Zafima-hova. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
hamahavahan' (nitranga in-1) : Fotoana iray hamahavahan'ny federasiona ihany koa ny fandaharam-potoanany mandritra ity taom-pilalaovana 2013 ity izany. (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
Nangony (nitranga in-1) : Nangonin'i Roméo Andriamihaja. (Tapatapany)
naratra (nitranga in-3) : lehilahy iray 50 taona, avy naka vola vidina entana, no naratra mafy notifirin'ireo jiolahy teo amin'ny tratrany, omaly tolakandro tokony ho tamin'ny 2 ora. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nizoran' (nitranga in-1) : Raha ny vaovao azo teo anivon'ny Foloalindahy dia manara-dia ny lalan'ireo omby nangalarina ary mampahafantatra ireo mpitandro ny filaminana ety an-tanety ny lalana nizoran'ireo dahalo sy ireo omby halatra no ho asan'io vorom-by io. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
dikantsary (nitranga in-1) : Ankoatra izany rehetra izany, nampiasa dia nampiasa ny dikantsarin'ny Adobe photoshop (mety ho nopiratena) ny mpiseran'ny RuNet ary namorona sary namboamboarina maro, na “fotozhaba” (ara-bakinteny “sary-sahona”) esoeson-tsarin'ny tainkintana nandritra ny famakivakiany ny lanitr'i Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hifanandrina (nitranga in-2) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
Barphil (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
ankatoavy (nitranga in-1) : Nambaran'ireto mpikam- bana ao amin'ny Cde ireto fa «Lalàm-panorenena tsy ankatoavin'ny iraisam-pirenena sy ny mpanao politika sasany no misy ankehi-triny». (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
mpony (nitranga in-1) : Nijery tamin-korohoro ny fanakaikezan'i Chelyabinsk ny mponin'ny tainkintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Nampiato (nitranga in-1) : Nampiato ny minisitry ny Rano Reboza Julien tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Psdum intsony ireo mpikatroka politika sasany miara-dia amin'i Lahini-riko Jean, izay ao anatin' ity antoko ity ihany. (Sombiny)
Birds (nitranga in-2) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
tale (nitranga in-3) : Taorian'io fivoriana io dia ny Filoha tale jeneralin'ny orinasa Papmad, Patrick Rajaonary no heverin' izy ireo fa tsara toerana indrindra, afaka hisedra ny fifidianana Filoham-pirenena. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
fiatrehan' (nitranga in-1) : Malaza nefa toa tsy henoheno ny fiatrehan'ireo klioba roa, AS Adema sy ny TCO Boeny, ny fifaninanana afrikanina rahampitso. (Baolina mamono tena)
natioran' (nitranga in-1) : Noho ny fahatakarana ny natioran'ilay sombin-tantara sy ny fandehan'ny resaka, misy ny mpisera Twitter manely ny fomba filaza ho tahaka izao:
nifampiresaka (nitranga in-1) : “Efa nifampiresaka izahay ka heveriko fa tsy tokony hisy ny olana amin'ny fandehanan-dry zareo fiarakodia”, hoy ihany ny sekretera jeneralin'ny Fmf. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
photoshop (nitranga in-1) : Ankoatra izany rehetra izany, nampiasa dia nampiasa ny dikantsarin'ny Adobe photoshop (mety ho nopiratena) ny mpiseran'ny RuNet ary namorona sary namboamboarina maro, na “fotozhaba” (ara-bakinteny “sary-sahona”) esoeson-tsarin'ny tainkintana nandritra ny famakivakiany ny lanitr'i Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
fahavononany (nitranga in-1) : Samy naneho ny fahavononany hampi- akatra ny taranja na i Norolalao Ramanantsoa, izay filoha vonjimaika amin'izao fotoana izao, sy Dominique Raherison filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha. (Tapatapany)
Ambohidahy (nitranga in-1) : Anglisy Ambatokaranana # AS Santos Ambohidahy Anka. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
JCSA (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
CHALLENGER (nitranga in-4) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
voamarina (nitranga in-1) : « Afaka mitifitra ihany anefa ny olona ao anatiny, raha tena voamarina fa olon- dratsy ireo olona hitany avy eny ambony. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
nety (nitranga in-1) : Vokatry ny rotsak'orana tsy nety nijanona no an-tony nampianjera ny tranon'ity niharan-doza ity. (Tapatapany)
natsatoka (nitranga in-1) : Zana-kazo, “fresme”, miisa 600 no natsatoka omaly. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
hiandry (nitranga in-1) : “Nomena safidy izy ireo na hiandry ny sidina mankany Mahajanga rahampitso alahady na handeha fiarakodia, dia ity farany no niantefan'ny safidiny”, araka ny nambaran'i Stanislas Rakotomalala, sekretera jeneralin'ny federasiona malagasin' ny baolina kitra (Fmf). (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
malazan' (nitranga in-1) : Ny tainkintan'i Chelyabinsk nampitahaina tamin'ny lalao malazan'ny Angry Birds. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
kilaon' (nitranga in-1) : Ny kilaon'ny vary makaolika no niakatra 2% raha oharina amin'ny vidin'ny makaolika tamin'iny herinandro lasa iny. (Tapatapany)
rotsak' (nitranga in-1) : Vokatry ny rotsak'orana tsy nety nijanona no an-tony nampianjera ny tranon'ity niharan-doza ity. (Tapatapany)
2013 (nitranga in-3) : Fotoana iray hamahavahan'ny federasiona ihany koa ny fandaharam-potoanany mandritra ity taom-pilalaovana 2013 ity izany. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
2012 (nitranga in-6) : 18 amin'izy ireo no mpilalao hifanandrina amin'ny tompon'ny amboaran'i Madagasikara taona 2012. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
hanaikitra (nitranga in-1) : manaitra sy mahagaga ihany ny mahita sy maheno fiarakodia arahina mpitandro filaminana mivandravandra amin'ny solomaso mainty toa hanaikitra amin'ny masony ireny eny an-dalana, indrindra mandritra ny fitohanan'ny fifa-moivoizana iny. (Sarotim-boninahitra)
Fakàna (nitranga in-1) : Fakàna sary miaraka amin'ny loko mavo sy maitso ahafantarana ny Telma no nangatahina tamin'ireo mpifankatia. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
TMB2A (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Raoul (nitranga in-1) : MIFANOME FAHEFANA
Nanapa-kevitra ny hanolotra ny toeran'ny filohan'ny federasiona malagasin'ny handisport ho an'ny sekretera jeneraliny, Monja Dinara, ny filoha amin'izao fotoana izao Patrice Raoul. (Tapatapany)
Nilaza (nitranga in-1) : Nilaza ny mbola fahavo-nonany handray andrai-kitra eo amin'ny fitantanana ny firenena ny Prai-minisitra teo aloha, ny jeneraly Camille Vital. (Sombiny)
mampahafantatra (nitranga in-1) : Raha ny vaovao azo teo anivon'ny Foloalindahy dia manara-dia ny lalan'ireo omby nangalarina ary mampahafantatra ireo mpitandro ny filaminana ety an-tanety ny lalana nizoran'ireo dahalo sy ireo omby halatra no ho asan'io vorom-by io. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
kaomandà (nitranga in-2) : ny sampan-draharahan'ny zandary misahana ny heloka bevava etsy Fiadanana no mandray an-tanana ny fikarohana ireo olon-dratsy nahavanona ny famonoana ilay kaomandà mpi-tsabo tetsy Soavim-bahoaka, ny alarobia alina teo. (Kaomandà – « Mety ho olona mahafantatra ihany no nahavanon-doza »)
azon' (nitranga in-1) : Araka ny famaritana voaray dia fanalefahan-tsazy roa volana no ho azon'ireo nomelohina higadra herintaona na latsak'izay. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
nampitandremina (nitranga in-1) : Isan'ny nampitandremina manokana ny ao Toliara Mahajanga noho ny herin'ny ranomasina. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
Ratefy (nitranga in-1) : anisan'ireo hetsika fanaon'ny fampianarana mozika Ratefy na CMR ny seho ataon'ireo mpianany. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
heveriko (nitranga in-1) : “Efa nifampiresaka izahay ka heveriko fa tsy tokony hisy ny olana amin'ny fandehanan-dry zareo fiarakodia”, hoy ihany ny sekretera jeneralin'ny Fmf. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
henoheno (nitranga in-1) : Malaza nefa toa tsy henoheno ny fiatrehan'ireo klioba roa, AS Adema sy ny TCO Boeny, ny fifaninanana afrikanina rahampitso. (Baolina mamono tena)
professionnelle (nitranga in-1) : Ny mifanohitra amin'izany no hita eny amin'ny toeram-piofanana tokana eto Madagasikara, izay voalohany taty Afrika, ny Centre de formation professionnelle Ampasampito (CFPA). (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
notarihy (nitranga in-1) : Nanao rodobe nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fambolen-kazo teny amin'ny faritry ny farihy Masay ny ekipa notarihin'ny Pds-n'Antananarivo, Razafindravahy Edgard. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
Bbcm (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
прямо (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
handaniana (nitranga in-1) : «Mialoha ny hiroso-ana amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka izay handaniana io Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV io dia tokony handrafitra karazana lalàna tovana hifehy ny fitantanana ny firenena ireo mpanao politika», araka ny fanazavan'i Serge Zafima-hova. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
nahavita (nitranga in-1) : « Ny mahafaly dia izay nahavita fiofanana eto aminay, mba efa misy orinasa mandray avokoa», hoy Ramanantsoa Johary Faly, tompon' andraikitra voalohany amin'ny fiofanana. (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
Mbabane (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
Sofarma (nitranga in-1) : AS Sofarma Ambanidia # Ravinala Avaradoha. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Joseph (nitranga in-1) : Ilay naratra kosa avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
nitondra (nitranga in-2) : Fiara iray 4L no nitondra azy, ka raha vao tafiditra izy dia niditra ihany koa ireo jiolahy sady naka ilay sakaosy feno vola », hoy ny nambaran'ny olona iray mivarotra eo amin'ny manodidina. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
nomelohina (nitranga in-1) : Araka ny famaritana voaray dia fanalefahan-tsazy roa volana no ho azon'ireo nomelohina higadra herintaona na latsak'izay. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
ligy (nitranga in-2) : Miady mafy tahaka ny inona ireo mpanohana, saingy toa ny federasiona sy ireo ligy no voky fa ilay taranja toa mitady tsy hahasarika olona intsony. (Tapatapany)
kANDIDA (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
tokontany (nitranga in-1) : Mpikambana ao amin'ny Pussy Riot mieritreritra “Ilay Virijiny Tsy Hita” , ary ahitana soratra manao hoe Chelyabinsk eo akaikin'ilay tainkintana hita amin'ny tokontanin'ny sary. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
handisport (nitranga in-1) : MIFANOME FAHEFANA
Ouest (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
minana (nitranga in-2) : efa nanenjehana dahalo tany Betroka tamin'ny hetsika Tandroka voalohany ny helikoptera
homarihina (nitranga in-1) : Feno 30 taona amin'ity taona ity io fampisehoana io, izay homarihina etsy amin' ny Espace Dera Tsiadana rahampitso. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
tenany (nitranga in-1) : Ao anatin'ny fanaovana sangisangy zary tenany amin'ny volavolan-dalàna Rosiana handrara ny ”fampielezan-kevitra fiarahan'olon-droa mitovy fananahana,” misy ireo mpisera Twitter mampiely [ru] vaovao tsy izy fa handany ny “fandrarana ny firesahana tainkintana” ny Domà, tahaka ny te-hiteny fa tsy mitombina tahaka ny fanaovana ho tsy ara-dalàna ny loza voajanahary ny fanoheran'ny governemanta ny pelaka. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
formation (nitranga in-1) : Ny mifanohitra amin'izany no hita eny amin'ny toeram-piofanana tokana eto Madagasikara, izay voalohany taty Afrika, ny Centre de formation professionnelle Ampasampito (CFPA). (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
dingan' (nitranga in-2) : «Hampitoviana amin'ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny izy ity, ka ny maraina no hanaovana ny dingan'ny fifanintsanana raha ny hariva kosa no hanatontosana ireo dingan'ny famaranana», hoy i Richard Randrianandraina, filohan'ny federasiona malagasin'ny lomano. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
mekanika (nitranga in-1) : Ankoatra ireo dia hahazo ny amboarany eny an-toerana ihany koa ireo tompondaka isan-tsokajiny ho an'ireo zana-taranja ao amin'ny fanatanjahantena mekanika ireo. (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
MB2ALL (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
StumbleUpon (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
Randriamisaina (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
Andraisoro (nitranga in-6) : hahita ny tena lalao ny mpitia baskety manomboka anio
kaomandy (nitranga in-1) : nisandoka anarana > Lehilahy iray no voa-laza fa nisandoka ny anaran'ny jeneraly Ravalomanana Richard, kaomandin'ny Zanda-riam-pirenena. (Tapatapany)
завод (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
Rakotomalala (nitranga in-1) : “Nomena safidy izy ireo na hiandry ny sidina mankany Mahajanga rahampitso alahady na handeha fiarakodia, dia ity farany no niantefan'ny safidiny”, araka ny nambaran'i Stanislas Rakotomalala, sekretera jeneralin'ny federasiona malagasin' ny baolina kitra (Fmf). (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Betsiboka (nitranga in-1) : Mitombo hatrany koa ireo faritra hizaka ny vokany noho ny ora- mikija, toy ny eto afovoan-tany, any Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Melaky, Menabe ary Atsimo Andrefana izay samy nampitandremiana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sy ny fiomanana hiatrika rivo-doza. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
Black (nitranga in-2) : Black Star Betongolo # As Santos. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
delicious (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
Dinara (nitranga in-1) : MIFANOME FAHEFANA
Anka (nitranga in-1) : Anglisy Ambatokaranana # AS Santos Ambohidahy Anka. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
maraimben' (nitranga in-1) : ny maraimben'ny 15 febroary, dia nandoro ny habakabaky ny tanànan'i Chelyabinsk ary mety ho nidona tamin'ny tany ny tainkintana iray. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Centre (nitranga in-1) : Ny mifanohitra amin'izany no hita eny amin'ny toeram-piofanana tokana eto Madagasikara, izay voalohany taty Afrika, ny Centre de formation professionnelle Ampasampito (CFPA). (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
taty (nitranga in-1) : Ny mifanohitra amin'izany no hita eny amin'ny toeram-piofanana tokana eto Madagasikara, izay voalohany taty Afrika, ny Centre de formation professionnelle Ampasampito (CFPA). (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
nampitandremiana (nitranga in-1) : Mitombo hatrany koa ireo faritra hizaka ny vokany noho ny ora- mikija, toy ny eto afovoan-tany, any Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Melaky, Menabe ary Atsimo Andrefana izay samy nampitandremiana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sy ny fiomanana hiatrika rivo-doza. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
nahazoana (nitranga in-1) : Tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny kaominina Antananarivo Renivohitra no nahazoana izao vokatra izao. (Analakely – 12 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpanendaka)
hihaona (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
hanoloran' (nitranga in-1) : toy ny fanao isan-taona dia amin'ny alalan'ny alim-pandihizana arahina sakafo no hanoloran'ny federasiona malagasin'ny hazakaza-piarakodia ny amboarany ho an'ireo tompondaka 2012, ka eny amin'ny CCI Ivato no hanaovana izany anio alina. (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
mihasahisahy (nitranga in-1) : Noho ny fahatakarana ny natioran'ilay sombin-tantara sy ny fandehan'ny resaka, misy ny mpisera Twitter manely ny fomba filaza ho tahaka izao:
hofidiana (nitranga in-1) : Io izany no hany kandidà mirotsaka hitantana ny toeran'ny filoha hofidiana anio eny amin'ny ANS Ampefiloha. (Tapatapany)
Patrice (nitranga in-1) : MIFANOME FAHEFANA
Patrick (nitranga in-1) : Taorian'io fivoriana io dia ny Filoha tale jeneralin'ny orinasa Papmad, Patrick Rajaonary no heverin' izy ireo fa tsara toerana indrindra, afaka hisedra ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
fifanintsanana (nitranga in-1) : «Hampitoviana amin'ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny izy ity, ka ny maraina no hanaovana ny dingan'ny fifanintsanana raha ny hariva kosa no hanatontosana ireo dingan'ny famaranana», hoy i Richard Randrianandraina, filohan'ny federasiona malagasin'ny lomano. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
ekipantsika (nitranga in-1) : Toa elaela izay tsy nandraisan'i Madagasikara lalao baolina kitra iraisam-pirenena izay, na nandrenesan'ny ekipantsika tany Afrika tany. (Baolina mamono tena)
novantaniny (nitranga in-1) : Na dia tsy novantaniny aza dia tsy nanafina ny faniriany hirotsaka ho kandidà amin'ny fifidianana Filo-ham-pirenena ity Praimi-nisitra teo aloha ity omaly. (Sombiny)
ifotony (nitranga in-3) : «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka». (Baolina mamono tena)
hamerenana (nitranga in-1) : Tsy maintsy ivere- nana hanaovana fitsirihana teknika isaky ny mahavita sidina 25 ora anefa izy io mialoha ny hamerenana azy miasa », raha ny nambaran'ny teo anivon'ny Tafika malagasy. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Betongolo (nitranga in-1) : Black Star Betongolo # As Santos. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Vakinankaratra (nitranga in-1) : Mpilomano 300 avy amin'ireo ligim-paritra efatra dia Analamanga, Atsinanana, Boeny ary Vakinankaratra no andrasana handray anjara amin' izany etsy amin'ny Esca Antanimena. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
Analakely (nitranga in-2) : Hetsika manokana nataon'ny polisy ho famongorana ireo mpanendaka sy mpangarom- paosy eny amin'ny faritra Analakely sy ny manodidina izany. (Analakely – 12 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpanendaka)
notifiry (nitranga in-1) : lehilahy iray 50 taona, avy naka vola vidina entana, no naratra mafy notifirin'ireo jiolahy teo amin'ny tratrany, omaly tolakandro tokony ho tamin'ny 2 ora. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Richard (nitranga in-2) : «Hampitoviana amin'ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny izy ity, ka ny maraina no hanaovana ny dingan'ny fifanintsanana raha ny hariva kosa no hanatontosana ireo dingan'ny famaranana», hoy i Richard Randrianandraina, filohan'ny federasiona malagasin'ny lomano. (Tapatapany)
tenako (nitranga in-1) : «Hatreto aloha dia mbola tsy nanaiky io fangatahana io ny tenako fa mbola hijery ny fomba ahafahako manatanteraka ny hetahetan'izy ireo», araka ny nomarihin'ity Filoha tale jeneralin'ny Papmad ity, omaly. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
Beryl (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
берёт (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
MIFANOME (nitranga in-1) : MIFANOME FAHEFANA
sakaosy (nitranga in-2) : Fiara iray 4L no nitondra azy, ka raha vao tafiditra izy dia niditra ihany koa ireo jiolahy sady naka ilay sakaosy feno vola », hoy ny nambaran'ny olona iray mivarotra eo amin'ny manodidina. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Swazis (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
ужасом (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
vahilavan' (nitranga in-1) : Henika ny mpiasan'ny Cua ny vahilavan'ny farihy Masay hatrany amin'ny manodidina ny zaridaina mba hamboly izany hazo izany. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
Club (nitranga in-1) : Fitaovam-pianarana mitentina Ar 3 685 000 no natolotry ny orinasa Ambatovy ny Club Rotary ao Toamasina ankoatra izay. (Tapatapany)
veteran (nitranga in-1) : Fa tsy latsak'izany koa ny hiakaran'ireo tanora zokiny na veteran an-tsehatra. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Soamanadrariny (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
ADIDY (nitranga in-1) : tSY HIAMBOHO ADIDY. (Sombiny)
Instapaper (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
hitan' (nitranga in-1) : ireo taolana dinaozaoro hita tany amin'ny Faritra Menabe iny
Niteraka resa-be teo amin'ny tontolon'ny fikarohana sy ny vakoka ambanin'ny tany ireo taolana dinôzôro hitan'ireo mpikaroka malagasy sy amerikanina tany amin'ny faritr'i Menabe. (Fikarohana – Hatsangana ny komity momba ireo vakoka ambanin’ny tany)
Foot (nitranga in-2) : FTA Foot Anjanahary # AS Tafaray Mandroseza. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
isaky (nitranga in-1) : Tsy maintsy ivere- nana hanaovana fitsirihana teknika isaky ny mahavita sidina 25 ora anefa izy io mialoha ny hamerenana azy miasa », raha ny nambaran'ny teo anivon'ny Tafika malagasy. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Ambohitrakely (nitranga in-1) : Lascar Ambohitrakely # FC Ankady. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
nampitondrana (nitranga in-1) : Nahatonga ny entana nampitondrana azy ihany ny “Sampan-draharahan'ny Paositra Rosiana”. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
napetraka (nitranga in-1) : Ka raha ny fanda- minana napetraka dia efatra ora ny fitambaran'ny sidina hotanterahiny ao anatin'ny iray andro. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Naturel (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
hahasarika (nitranga in-1) : Miady mafy tahaka ny inona ireo mpanohana, saingy toa ny federasiona sy ireo ligy no voky fa ilay taranja toa mitady tsy hahasarika olona intsony. (Baolina mamono tena)
Fitovinany (nitranga in-2) : omaly no nivory tany Fia- narantsoa nampahafantatra ny kandidà hotohanany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena ireo zanaky ny faritra Atsimo avy any Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Anosy ary i Menabe. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
Olivier (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
Ivan (nitranga in-1) : Ny hatsikana momba an'i Chelyabinsk [ru] no manjaka indrindra eo amin'ny tontolon'ny hatsika Rosiana—hita ao amin'ny sombim-pandaharan'i Ivan Dulin ao amin'ny fahitalavitra Nasha Rosia [ru]. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
RuNet (nitranga in-3) : Na dia teo aza ny fahapotehina sy ny ratra vokatr'ilay voina tamin'io andro 15 febroary io, dia kinga kokoa tamin'ny famazivaziana sy ny fanaovana hafatra mampihomehy ny mpiseran'ny RuNet. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
BBCM (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Julien (nitranga in-1) : Nampiato ny minisitry ny Rano Reboza Julien tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Psdum intsony ireo mpikatroka politika sasany miara-dia amin'i Lahini-riko Jean, izay ao anatin' ity antoko ity ihany. (Sombiny)
hanenina (nitranga in-1) : Tsy hanenina isika raha mamboly hazo ho an'ny taranaka any aoriana”, hoy ny Pds. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
ABRSM (nitranga in-1) : Sehatra ihany koa hizaràna ny diplaoma ABRSM 2012 io fotoana io. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
hitany (nitranga in-1) : « Afaka mitifitra ihany anefa ny olona ao anatiny, raha tena voamarina fa olon- dratsy ireo olona hitany avy eny ambony. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
tainkintan' (nitranga in-1) : Ny tainkintan'i Chelyabinsk nampitahaina tamin'ny lalao malazan'ny Angry Birds. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
habakabaky (nitranga in-1) : ny maraimben'ny 15 febroary, dia nandoro ny habakabaky ny tanànan'i Chelyabinsk ary mety ho nidona tamin'ny tany ny tainkintana iray. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Ambohimanarima (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Tovonjanahary (nitranga in-1) : Ho an'Antanimora manokana dia mandray olona voafonja hatrany amin'ny 60 na mahery isan'andro », hoy indray Ranaivo Andriamaro-ahina Tovonjanahary, tale jeneralin'ny fiadidiana ny fonja. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
Santos (nitranga in-3) : Anglisy Ambatokaranana # AS Santos Ambohidahy Anka. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Notanterahina (nitranga in-1) : Notanterahina omaly teny amin'ny foiben- toeran'ny Telma teny Alarobia ny fanolorana ny loka ho an-dRavelonarivo Tsitohery sy Randrianarijaona Anjasoa, izay nampiseho sary nankafizin'ny mpitsidika ny kaonty Facebook-n' ny ny Telma. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
приближение (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
Ambatokaranana (nitranga in-2) : Anglisy Ambatokaranana # AS Santos Ambohidahy Anka. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Ramanantsoa (nitranga in-2) : Samy naneho ny fahavononany hampi- akatra ny taranja na i Norolalao Ramanantsoa, izay filoha vonjimaika amin'izao fotoana izao, sy Dominique Raherison filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha. (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
hijery (nitranga in-1) : «Hatreto aloha dia mbola tsy nanaiky io fangatahana io ny tenako fa mbola hijery ny fomba ahafahako manatanteraka ny hetahetan'izy ireo», araka ny nomarihin'ity Filoha tale jeneralin'ny Papmad ity, omaly. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
faritry (nitranga in-1) : Nanao rodobe nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fambolen-kazo teny amin'ny faritry ny farihy Masay ny ekipa notarihin'ny Pds-n'Antananarivo, Razafindravahy Edgard. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
Anna (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
дождь (nitranga in-1) : Noho ny fahatakarana ny natioran'ilay sombin-tantara sy ny fandehan'ny resaka, misy ny mpisera Twitter manely ny fomba filaza ho tahaka izao:
ahafahana (nitranga in-1) : Ny fananan'ity farany traikefa amin'ny fanorenana tetikasa ahafahana mampandroso ireo faritra ireo no anton'ity fanapahan-kevitra noraisin' ireo zanaky ny faritra Atsimo ity. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
Anjasoa (nitranga in-1) : Notanterahina omaly teny amin'ny foiben- toeran'ny Telma teny Alarobia ny fanolorana ny loka ho an-dRavelonarivo Tsitohery sy Randrianarijaona Anjasoa, izay nampiseho sary nankafizin'ny mpitsidika ny kaonty Facebook-n' ny ny Telma. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
handehanany (nitranga in-1) : Omaly tolakandro vao nigadona teny amin' ny seranam-piaramanidina Ivato, izay fotoana tokony hisian'ny sidina mankany Mahajanga saika handehanany izy ireo. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
piana (nitranga in-1) : efa nanenjehana dahalo tany Betroka tamin'ny hetsika Tandroka voalohany ny helikoptera
Huges (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
Olshansky (nitranga in-1) : Mitaraina amin'ny toerana misy ny firenena ny mpanao gazety Dmitri Olshansky, tamin'ny fanoratana [ru] tao amin'ny Facebook, ho ”mahantra, Rosia mahantra, zavatra iray hatrany,” raha miresaka amin'ilay tatitra [ru] nataon'i Lenta. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
traikefa (nitranga in-1) : Ny fananan'ity farany traikefa amin'ny fanorenana tetikasa ahafahana mampandroso ireo faritra ireo no anton'ity fanapahan-kevitra noraisin' ireo zanaky ny faritra Atsimo ity. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
Unicef (nitranga in-1) : Ilay fanampiana mitentina 1 tapitrisa dôlara vita sonia teo amin'ny minisiteran' ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola, ny Banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana (Bad) sy ny Unicef ny volana aogositra 2012 lasa iny no nanaovana ny asa. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
fampiatoana (nitranga in-1) : Mandritra ny roa taona io fampiatoana io, araka ny voalazan'izy ireo tetsy amin'ny «cafétéria»-n' ny Kaongresin'ny tetezamita tetsy Tsimbazaza, omaly. (Sombiny)
firesahana (nitranga in-1) : Ao anatin'ny fanaovana sangisangy zary tenany amin'ny volavolan-dalàna Rosiana handrara ny ”fampielezan-kevitra fiarahan'olon-droa mitovy fananahana,” misy ireo mpisera Twitter mampiely [ru] vaovao tsy izy fa handany ny “fandrarana ny firesahana tainkintana” ny Domà, tahaka ny te-hiteny fa tsy mitombina tahaka ny fanaovana ho tsy ara-dalàna ny loza voajanahary ny fanoheran'ny governemanta ny pelaka. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hiasany (nitranga in-1) : Tsy ny eto Betroka ihany no hiasany amin'izany fa ny faritra Atsimo iray manontolo mihitsy », hoy ny lehiben' ny vondron-tobim-paritry ny Zandary any Betroka. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Vohitranivona (nitranga in-1) : Efitrano fianarana 34 eo anivon'ny Epp Ampasimbe Vohitranivona, niampy toeram-pitsaboana telo ahitana trano fivoahana sy toerana fakàna rano no an-dalam-panarenana ankehitriny. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
Poudrette (nitranga in-1) : Mpianatra 330 eo anivon'ny Epp La Poudrette ao Toamasina no notolorana ireo fitaovam-pianarana ireo. (Tapatapany)
mpikatroka (nitranga in-1) : Nampiato ny minisitry ny Rano Reboza Julien tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Psdum intsony ireo mpikatroka politika sasany miara-dia amin'i Lahini-riko Jean, izay ao anatin' ity antoko ity ihany. (Sombiny)
Ireto (nitranga in-1) : Ireto farany izay mihevitra fa tokony hiorina amin'ny soson-kevitra avy amin'ireo Filoham-pokontany sy ny Lehiben'ny distrika ny fandra- fetana ny Lalàm-panorenana hampiharina amin'ny Repo-blika faha-IV. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
Norolalao (nitranga in-1) : Samy naneho ny fahavononany hampi- akatra ny taranja na i Norolalao Ramanantsoa, izay filoha vonjimaika amin'izao fotoana izao, sy Dominique Raherison filohan'ny ligin'Analamanga teo aloha. (Tapatapany)
lohahevitry (nitranga in-1) : ny fanolorana ny loka ho an' ireo mpandresy teny amin'ny foiben'ny Telma teny Alarobia
«Mifankatia… amin'ny loko Telma», io no lohahevitry ny fifaninanana sary pika natolotry ny Telma ho an'ny mpifankatia tao anatin'ny fanamarihana sy firaiketana ny fetin'ny mpifankatia 2013. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
цинковый (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
aminny (nitranga in-1) : ireto indray ny tohin' ny fandaharan-dalao ho an'ny «Tournoi Mazaka», lalao baolina kitra an'olona fito karakarain'ny Fiteramana etsy aminny kianjam-pasika Fort-Duchesne ho an'ny rahampitso alahady. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
afrikniana (nitranga in-1) : Mampalahelo fa ireo mpilalao vahiny, eoropeanina sy amerikanina tatsimo ary sangasangany amin'ny baolina kitra afrikniana indray no hain'ireo mpitia baolina kitra tsianjery noho ireo mpilalaony eto an-tanindrazana. (Baolina mamono tena)
Jentilisa (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
ireto (nitranga in-7) : Nambaran'ireto mpikam- bana ao amin'ny Cde ireto fa «Lalàm-panorenena tsy ankatoavin'ny iraisam-pirenena sy ny mpanao politika sasany no misy ankehi-triny». (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Glacier (nitranga in-1) : Eny amin'ny Esplanade Analakely sy eny amin'ny Glacier no tena fanaovan'izy ireto ny asa ratsiny, ary efa indroa na intelo no nigadra ny sasany tamin'izy ireto”, hoy ny tatitra voaray teo anivon'ny polisim-pirenena. (Analakely – 12 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpanendaka)
Tsiadana (nitranga in-1) : Feno 30 taona amin'ity taona ity io fampisehoana io, izay homarihina etsy amin' ny Espace Dera Tsiadana rahampitso. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
nadika (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
reddit (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
Vital (nitranga in-1) : Nilaza ny mbola fahavo-nonany handray andrai-kitra eo amin'ny fitantanana ny firenena ny Prai-minisitra teo aloha, ny jeneraly Camille Vital. (Sombiny)
Afrika (nitranga in-2) : Toa elaela izay tsy nandraisan'i Madagasikara lalao baolina kitra iraisam-pirenena izay, na nandrenesan'ny ekipantsika tany Afrika tany. (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
mampanahy (nitranga in-1) : mampanahy. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
Razafindrainony (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
Lascar (nitranga in-1) : Lascar Ambohitrakely # FC Ankady. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Stanislas (nitranga in-1) : “Nomena safidy izy ireo na hiandry ny sidina mankany Mahajanga rahampitso alahady na handeha fiarakodia, dia ity farany no niantefan'ny safidiny”, araka ny nambaran'i Stanislas Rakotomalala, sekretera jeneralin'ny federasiona malagasin' ny baolina kitra (Fmf). (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Rahamefy (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
Vatovavy (nitranga in-2) : omaly no nivory tany Fia- narantsoa nampahafantatra ny kandidà hotohanany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena ireo zanaky ny faritra Atsimo avy any Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Anosy ary i Menabe. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
hanohizana (nitranga in-1) : Tanjon'ny CRM ny hampiroboroboana ny fahaizana, ny fianarana, ny filalaovana mozika, hitady izay mety hanohizana azy hatrany amin'ny ambaratonga ambony. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
Nadezhda (nitranga in-1) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
voasambotry (nitranga in-2) : Mpamaky trano voasambotra > Dimy lahy tamin'ireo 11 nana-fika trano iray tany Soa-vinandriana Itasy no voasambotry ny zandary ny alakamisy teo niaraka tamin'ny basy vita gasy roa. (Analakely – 12 taona ny zandriny indrindra amin’ireo mpanendaka)
voakasik' (nitranga in-1) : Ho an'ny fonjan'Antani-mora dia mety ho manodi-dina ny 400 eo, toy ny tamin' ny taon-dasa, ny isan'ireo voafonja ho voakasik'io fanalefahan-tsazy io. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
руду (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
Tsarahonenana (nitranga in-1) : Anglisy Ambatokaranana # FC Ami Tsarahonenana. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
hanoloan' (nitranga in-1) : ru fa misy ny mponina sasany ao Chelyabinsk no namaky ny varavarany mba hanoloan'ny fanjakana izany satria hoe tra-boinan'ny tainkintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
namoaka (nitranga in-2) : Ny maraimbe ary dia efa namoaka [ru] ango-tsary tao amin'ny bolongana LiveJournal ilay mpibilaogintsary malaza Ilya Varlamov. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
mpibilaogintsary (nitranga in-1) : Ny maraimbe ary dia efa namoaka [ru] ango-tsary tao amin'ny bolongana LiveJournal ilay mpibilaogintsary malaza Ilya Varlamov. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Tahiana (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
mibaiko (nitranga in-1) : Putin mibaiko tainkintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
ataon' (nitranga in-1) : anisan'ireo hetsika fanaon'ny fampianarana mozika Ratefy na CMR ny seho ataon'ireo mpianany. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
Noheverina (nitranga in-1) : ny talen'ny CFP Ampasampito, Razaimanahirana Honorine
notolorana (nitranga in-1) : Mpianatra 330 eo anivon'ny Epp La Poudrette ao Toamasina no notolorana ireo fitaovam-pianarana ireo. (Tapatapany)
karakaray (nitranga in-1) : ireto indray ny tohin' ny fandaharan-dalao ho an'ny «Tournoi Mazaka», lalao baolina kitra an'olona fito karakarain'ny Fiteramana etsy aminny kianjam-pasika Fort-Duchesne ho an'ny rahampitso alahady. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
mpisera (nitranga in-3) : ”
Raha efa zara raha zava-baovao ilay vazivazy fanao, dia niezaka ny hamalifaly ny hafa amin'ny alalan'ny fanampohana mahomby [ru] ny mpisera RuNet. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Dmitry (nitranga in-1) : Mitaraina amin'ny toerana misy ny firenena ny mpanao gazety Dmitri Olshansky, tamin'ny fanoratana [ru] tao amin'ny Facebook, ho ”mahantra, Rosia mahantra, zavatra iray hatrany,” raha miresaka amin'ilay tatitra [ru] nataon'i Lenta. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
dinaozaoro (nitranga in-1) : ireo taolana dinaozaoro hita tany amin'ny Faritra Menabe iny
kandidà (nitranga in-3) : Na dia tsy novantaniny aza dia tsy nanafina ny faniriany hirotsaka ho kandidà amin'ny fifidianana Filo-ham-pirenena ity Praimi-nisitra teo aloha ity omaly. (Tapatapany)
Avaradoha (nitranga in-2) : AS Sofarma Ambanidia # Ravinala Avaradoha. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Ravoahangy (nitranga in-1) : Ilay naratra kosa avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
voafonjan' (nitranga in-1) : mety hahatratra 400 eo ireo voafonjan'Antanimora hahazo fanalefahan-tsazy
tranombarotra (nitranga in-1) : « Mpaka vola vidin'entana eny amin'ireo tranombarotra iray eny Anosibe ity lehilahy ity. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
hiresahana (nitranga in-1) : Fotoana hiresahana sy hijerena ifotony ny tena zava-misy marina iainan'ity taranja be mpankafy indrindra maneran-tany ity ny fiverenan'ireo klioba malagasy indray eo amin'ny fifaninanana afrikanina, efa ho herintaona aty aoriana. (Baolina mamono tena)
Teddy (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
makaolika (nitranga in-2) : Ny kilaon'ny vary makaolika no niakatra 2% raha oharina amin'ny vidin'ny makaolika tamin'iny herinandro lasa iny. (Tapatapany)
nataon' (nitranga in-6) : Modely mendrika alain-tahaka ny fihetsika nataon'ireo mpiasan'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) omaly. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hiorina (nitranga in-1) : Ireto farany izay mihevitra fa tokony hiorina amin'ny soson-kevitra avy amin'ireo Filoham-pokontany sy ny Lehiben'ny distrika ny fandra- fetana ny Lalàm-panorenana hampiharina amin'ny Repo-blika faha-IV. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
anton' (nitranga in-2) : Ny fananan'ity farany traikefa amin'ny fanorenana tetikasa ahafahana mampandroso ireo faritra ireo no anton'ity fanapahan-kevitra noraisin' ireo zanaky ny faritra Atsimo ity. (Fahasalamana – Azo fantarina amin’ny fitiliana “Adn” ny aretina mety hahazo)
Челябинский (nitranga in-2) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
Adema (nitranga in-1) : Malaza nefa toa tsy henoheno ny fiatrehan'ireo klioba roa, AS Adema sy ny TCO Boeny, ny fifaninanana afrikanina rahampitso. (Baolina mamono tena)
mazàna (nitranga in-1) : Mano-didina ny 3 000 eo mazàna io tarehimarika io ho an'ireo fonja manerana ny Nosy. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
Roméo (nitranga in-2) : Roméo Andriamihaja. (Tapatapany)
Ampefiloha (nitranga in-1) : Io izany no hany kandidà mirotsaka hitantana ny toeran'ny filoha hofidiana anio eny amin'ny ANS Ampefiloha. (Tapatapany)
swazis (nitranga in-2) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
piaramanidina (nitranga in-1) : Raha ny fitsipika avy any amin'ny Caf dia tsy maintsy mandeha fiaramanidina ny ekipa manafika raha mihoatra ny 200 km misy ny seranam- piaramanidina iraisam-pirenena ny kianja hilalao- vana. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Rotary (nitranga in-1) : Fitaovam-pianarana mitentina Ar 3 685 000 no natolotry ny orinasa Ambatovy ny Club Rotary ao Toamasina ankoatra izay. (Tapatapany)
vana (nitranga in-1) : Raha ny fitsipika avy any amin'ny Caf dia tsy maintsy mandeha fiaramanidina ny ekipa manafika raha mihoatra ny 200 km misy ny seranam- piaramanidina iraisam-pirenena ny kianja hilalao- vana. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Michel (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
ekipan' (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Navalny (nitranga in-2) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
nahitana (nitranga in-1) : Nialoha ny filentehan'ny masoandro, nitatitra ny mpitantana ao Chelyabinsk Oblast fa manakaiky [ru] ny arivo ny olona naratra, izay saika avy amin'ny fahavakisam-pitaratra avokoa, ary nahitana ankizy 204 tamin'izany. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Nijery (nitranga in-1) : Nijery tamin-korohoro ny fanakaikezan'i Chelyabinsk ny mponin'ny tainkintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
HOMME (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Rosiana (nitranga in-4) : Amin'izao fotoana [15 feb] izao dia mbola mitady [ru] izay toerana nianjeran'ilay tainkintana ny fitondram-panjakana Rosiana, fa ny zavatra azo antoka dia niteraka feo malaky dia malaky niteraka fahavakisam-baravaram-pitaratra sy zavatra hafa izany. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hisian' (nitranga in-1) : Omaly tolakandro vao nigadona teny amin' ny seranam-piaramanidina Ivato, izay fotoana tokony hisian'ny sidina mankany Mahajanga saika handehanany izy ireo. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Panorama (nitranga in-1) : MAFANAFANA
Ankatso (nitranga in-2) : 11 Suprême Ankatso # Frero Ambohipo. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Челябинска (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
Hifampitady (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
maraimbe (nitranga in-1) : Ny maraimbe ary dia efa namoaka [ru] ango-tsary tao amin'ny bolongana LiveJournal ilay mpibilaogintsary malaza Ilya Varlamov. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Frero (nitranga in-2) : 11 Suprême Ankatso # Frero Ambohipo. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
hevery (nitranga in-1) : Taorian'io fivoriana io dia ny Filoha tale jeneralin'ny orinasa Papmad, Patrick Rajaonary no heverin' izy ireo fa tsara toerana indrindra, afaka hisedra ny fifidianana Filoham-pirenena. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
nampianarana (nitranga in-1) : Efitrano fianarana 1 329 nampianarana ankizy 77 000 sy toeram-pitsaboana 60 mahery no rava tao Brickaville sy Vatomandry, taorian'ny fandalovan'i Irina sy Giovanna. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
Riot (nitranga in-3) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Antsahameva (nitranga in-1) : Pacific Fort Duchesne # Pro Antsahameva. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
lava (nitranga in-1) : Ho resy lava eto foana isika raha izao no mitohy. (Baolina mamono tena)
Ambohimanarina (nitranga in-4) : Andrasan' ny rehetra ny fihaonan'ny TTS Ambohimanarina sy ny AT2B Andraisoro, izay mpikarakara rahateo ny fihaonana. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
tainkintana (nitranga in-10) : ny maraimben'ny 15 febroary, dia nandoro ny habakabaky ny tanànan'i Chelyabinsk ary mety ho nidona tamin'ny tany ny tainkintana iray. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hivadihan' (nitranga in-1) : Mitombina hatrany hatreto ny vinan'ny mpamantatra ny toetr'andro ny mety hivadihan'ilay andian-drahona arahi-maso ao amin'ny lakandranon' i Mozambika ho rivo-doza afaka iray na roa andro. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
drina (nitranga in-1) : MAFANAFANA
aretina (nitranga in-4) : Efa tonga eto amintsika indray amin' izao fotoana ny fitiliana mialoha ny aretina mety hahazo ny olona iray. (Fahasalamana – Azo fantarina amin’ny fitiliana “Adn” ny aretina mety hahazo)
Ambohimirary (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
dôlara (nitranga in-1) : Ilay fanampiana mitentina 1 tapitrisa dôlara vita sonia teo amin'ny minisiteran' ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola, ny Banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana (Bad) sy ny Unicef ny volana aogositra 2012 lasa iny no nanaovana ny asa. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
hotohanany (nitranga in-1) : omaly no nivory tany Fia- narantsoa nampahafantatra ny kandidà hotohanany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena ireo zanaky ny faritra Atsimo avy any Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Anosy ary i Menabe. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
fakàna (nitranga in-1) : Efitrano fianarana 34 eo anivon'ny Epp Ampasimbe Vohitranivona, niampy toeram-pitsaboana telo ahitana trano fivoahana sy toerana fakàna rano no an-dalam-panarenana ankehitriny. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
tratrany (nitranga in-1) : lehilahy iray 50 taona, avy naka vola vidina entana, no naratra mafy notifirin'ireo jiolahy teo amin'ny tratrany, omaly tolakandro tokony ho tamin'ny 2 ora. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
hanozona (nitranga in-1) : ” Miresaka momba ny “vavaka” nataon'ny Pussy Riot “prayer” hanozona an'i Putin. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Randrianarijaona (nitranga in-1) : Notanterahina omaly teny amin'ny foiben- toeran'ny Telma teny Alarobia ny fanolorana ny loka ho an-dRavelonarivo Tsitohery sy Randrianarijaona Anjasoa, izay nampiseho sary nankafizin'ny mpitsidika ny kaonty Facebook-n' ny ny Telma. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
Tida (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
hôpitaly (nitranga in-1) : Ilay naratra kosa avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
nirotsahan' (nitranga in-1) : Amin'ireo ambany ireto ny sasany izay tena niely indrindra, “fotozhaba” fialana voly tamin'ny nirotsahan'ny tainkintana tao Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hiainana (nitranga in-1) : mba hoentina hisentoana hiainana baolina kitra malagasy indray ity faran'ny herinandro ity. (Baolina mamono tena)
Psdum (nitranga in-1) : Nampiato ny minisitry ny Rano Reboza Julien tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Psdum intsony ireo mpikatroka politika sasany miara-dia amin'i Lahini-riko Jean, izay ao anatin' ity antoko ity ihany. (Sombiny)
koptera (nitranga in-1) : Hiasa iray volana
Brickaville (nitranga in-3) : isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna sy Irina i Brickaville
nanombohan' (nitranga in-1) : Ny taona 1983 no nanombohan' ny sehatra raha dimy taona talohan'io no nijoroan'ny sekoly. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
handrara (nitranga in-1) : Ao anatin'ny fanaovana sangisangy zary tenany amin'ny volavolan-dalàna Rosiana handrara ny ”fampielezan-kevitra fiarahan'olon-droa mitovy fananahana,” misy ireo mpisera Twitter mampiely [ru] vaovao tsy izy fa handany ny “fandrarana ny firesahana tainkintana” ny Domà, tahaka ny te-hiteny fa tsy mitombina tahaka ny fanaovana ho tsy ara-dalàna ny loza voajanahary ny fanoheran'ny governemanta ny pelaka. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nangatahina (nitranga in-1) : Fakàna sary miaraka amin'ny loko mavo sy maitso ahafantarana ny Telma no nangatahina tamin'ireo mpifankatia. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
Ihosy (nitranga in-1) : Afak'omaly no efa nivory tao Ihosy mahakasika ny fandaminana asa rehetra hatao amin'ny ady amin'ny asan-dahalo ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Aubin (nitranga in-1) : Dimy volana ho an'ireo telo taona hatra-min'ny efa-taona ary enim-bolana ho an'ireo mihoatra ny efa-taona », hoy Rajer-narson Aubin, lehiben'ny fonjan'Antanimora. (Raharaham-pitsarana – Nivoaka ny lisitr’ireo voafonja hahazo fanalefahan-tsazy)
nahavanona (nitranga in-1) : ny sampan-draharahan'ny zandary misahana ny heloka bevava etsy Fiadanana no mandray an-tanana ny fikarohana ireo olon-dratsy nahavanona ny famonoana ilay kaomandà mpi-tsabo tetsy Soavim-bahoaka, ny alarobia alina teo. (Kaomandà – « Mety ho olona mahafantatra ihany no nahavanon-doza »)
Louvel (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
dinôzôro (nitranga in-1) : ireo taolana dinaozaoro hita tany amin'ny Faritra Menabe iny
taikintana (nitranga in-1) : Noho ny Rosiana maro mampiasa fakantsary fafana fanaraha-maso ao amin'ny fiarakodiany (noho ny antony fiantohana amin'ny ankapobeny), dia maro ihany koa no nanana mivantana tamin'ny fianjeran'ny taikintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
mangatsiakan' (nitranga in-1) : Tonga nidodododo nitsapa alahelo teny Androhibe, trano misy ny vatana mangatsiakan'ilay kaomandà, kosa omaly antoandro ireo manambonina-hitra maro teo anivon' ny Foloalindahy. (Kaomandà – « Mety ho olona mahafantatra ihany no nahavanon-doza »)
Chelyabinsk (nitranga in-14) : ny maraimben'ny 15 febroary, dia nandoro ny habakabaky ny tanànan'i Chelyabinsk ary mety ho nidona tamin'ny tany ny tainkintana iray. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nampahafantatra (nitranga in-1) : omaly no nivory tany Fia- narantsoa nampahafantatra ny kandidà hotohanany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena ireo zanaky ny faritra Atsimo avy any Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Anosy ary i Menabe. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
YouTube (nitranga in-1) : Heniky ny mpankafy lahatsary ihany koa ny YouTube. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Toamasina (nitranga in-2) : Fitaovam-pianarana mitentina Ar 3 685 000 no natolotry ny orinasa Ambatovy ny Club Rotary ao Toamasina ankoatra izay. (Tapatapany)
Analamanga (nitranga in-1) : Mpilomano 300 avy amin'ireo ligim-paritra efatra dia Analamanga, Atsinanana, Boeny ary Vakinankaratra no andrasana handray anjara amin' izany etsy amin'ny Esca Antanimena. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
famakivakiany (nitranga in-1) : Ankoatra izany rehetra izany, nampiasa dia nampiasa ny dikantsarin'ny Adobe photoshop (mety ho nopiratena) ny mpiseran'ny RuNet ary namorona sary namboamboarina maro, na “fotozhaba” (ara-bakinteny “sary-sahona”) esoeson-tsarin'ny tainkintana nandritra ny famakivakiany ny lanitr'i Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hahafahana (nitranga in-1) : Mety hahafahana misoroka avy hatrany ny aretina izy io, eny fa na dia efa toe-batana aza. (Fahasalamana – Azo fantarina amin’ny fitiliana “Adn” ny aretina mety hahazo)
nandoro (nitranga in-1) : ny maraimben'ny 15 febroary, dia nandoro ny habakabaky ny tanànan'i Chelyabinsk ary mety ho nidona tamin'ny tany ny tainkintana iray. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
fantarta (nitranga in-1) : sary nataon'olona tsy fantarta niely tokoa tamin'ny serasera. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
TEAM (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Anosibe (nitranga in-1) : « Mpaka vola vidin'entana eny amin'ireo tranombarotra iray eny Anosibe ity lehilahy ity. (Anosibe – Lasa ny vola iray sakaosy, lehilahy iray voatifitra)
Terrible (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
hajariana (nitranga in-1) : “Raha misy toerana tahaka an'i Masay izao hajariana ho tontolo maitso, dia mba haha- fahan'ny olona manana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina”, hoy izy. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
Ampasampito (nitranga in-3) : ny talen'ny CFP Ampasampito, Razaimanahirana Honorine
Ampasimbe (nitranga in-1) : Efitrano fianarana 34 eo anivon'ny Epp Ampasimbe Vohitranivona, niampy toeram-pitsaboana telo ahitana trano fivoahana sy toerana fakàna rano no an-dalam-panarenana ankehitriny. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
Gerard (nitranga in-1) : kANDIDA TELO
Adobe (nitranga in-1) : Ankoatra izany rehetra izany, nampiasa dia nampiasa ny dikantsarin'ny Adobe photoshop (mety ho nopiratena) ny mpiseran'ny RuNet ary namorona sary namboamboarina maro, na “fotozhaba” (ara-bakinteny “sary-sahona”) esoeson-tsarin'ny tainkintana nandritra ny famakivakiany ny lanitr'i Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Tolokonnikova (nitranga in-1) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
AT2B (nitranga in-6) : Andrasan' ny rehetra ny fihaonan'ny TTS Ambohimanarina sy ny AT2B Andraisoro, izay mpikarakara rahateo ny fihaonana. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
AESCOM (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Claudio (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
mirefy (nitranga in-1) : anio sy rahampitso no hanatontosana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny taranja lomano eo amina dobo filomanosana mirefy 25 metatra. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
hahafahan' (nitranga in-1) : Mba hahafahan'ny olona mitandrina sy miomana avy hatrany no nambaran'ireo mpanao fitiliana fa anton'izany. (Fahasalamana – Azo fantarina amin’ny fitiliana “Adn” ny aretina mety hahazo)
Honorine (nitranga in-2) : ny talen'ny CFP Ampasampito, Razaimanahirana Honorine
anisan' (nitranga in-1) : anisan'ireo hetsika fanaon'ny fampianarana mozika Ratefy na CMR ny seho ataon'ireo mpianany. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
fahapotehina (nitranga in-1) : Na dia teo aza ny fahapotehina sy ny ratra vokatr'ilay voina tamin'io andro 15 febroary io, dia kinga kokoa tamin'ny famazivaziana sy ny fanaovana hafatra mampihomehy ny mpiseran'ny RuNet. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
lalàna (nitranga in-1) : «Mialoha ny hiroso-ana amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka izay handaniana io Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV io dia tokony handrafitra karazana lalàna tovana hifehy ny fitantanana ny firenena ireo mpanao politika», araka ny fanazavan'i Serge Zafima-hova. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
Melaky (nitranga in-1) : Mitombo hatrany koa ireo faritra hizaka ny vokany noho ny ora- mikija, toy ny eto afovoan-tany, any Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Betsiboka, Melaky, Menabe ary Atsimo Andrefana izay samy nampitandremiana amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sy ny fiomanana hiatrika rivo-doza. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
Razaimanahirana (nitranga in-2) : ny talen'ny CFP Ampasampito, Razaimanahirana Honorine
nomarihy (nitranga in-1) : «Hatreto aloha dia mbola tsy nanaiky io fangatahana io ny tenako fa mbola hijery ny fomba ahafahako manatanteraka ny hetahetan'izy ireo», araka ny nomarihin'ity Filoha tale jeneralin'ny Papmad ity, omaly. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
hanatontosana (nitranga in-2) : anio sy rahampitso no hanatontosana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara ho an'ny taranja lomano eo amina dobo filomanosana mirefy 25 metatra. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
Telma (nitranga in-6) : ny fanolorana ny loka ho an' ireo mpandresy teny amin'ny foiben'ny Telma teny Alarobia
nateraky (nitranga in-1) : isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna sy Irina i Brickaville
tarihy (nitranga in-2) : Tokony hiainga any ifotony ny famolavolana ny Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV, raha ny soson-kevitra avy amin' ireo mpikambana eo ani-von'ny sehatra misahana ny fiahiana ny fampandrosoana sy ny etika (cde) izay tarihin' i Serge Zafimahova. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
Ankadindramamy (nitranga in-2) : FCJ Ankadindramamy # Mangarivotra. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
nandrenesan' (nitranga in-1) : Toa elaela izay tsy nandraisan'i Madagasikara lalao baolina kitra iraisam-pirenena izay, na nandrenesan'ny ekipantsika tany Afrika tany. (Baolina mamono tena)
nisioka (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
distrikan' (nitranga in-1) : isan'ny nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna sy Irina i Brickaville
mpilalao (nitranga in-3) : Tsy mety manaiky izany ireo tena mpisehatra isan-tsoka- jiny, na mpitarika ny federasiona, na ireo mpitaiza sy mpanazatra, na ireo mpilalao. (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
minisiteran' (nitranga in-5) : Ho fisorohana ny fifanolanana toy ireny dia nisy, omaly, ny fihaonana teo amin'ny sekretera jeneralin'ny minisiteran'ny Kolontsaina sy ny vakoka tamin'ireo mpikaroka eny amin'ny oniversite, indrindra ny ao amin'ny sampana siansa momba ny tany, mba hitadiavana fomba fiasa mahakasika ny fikarohana ireo vakoka any ambanin' ny tany. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
arivo (nitranga in-1) : Nialoha ny filentehan'ny masoandro, nitatitra ny mpitantana ao Chelyabinsk Oblast fa manakaiky [ru] ny arivo ny olona naratra, izay saika avy amin'ny fahavakisam-pitaratra avokoa, ary nahitana ankizy 204 tamin'izany. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nangalarina (nitranga in-1) : Raha ny vaovao azo teo anivon'ny Foloalindahy dia manara-dia ny lalan'ireo omby nangalarina ary mampahafantatra ireo mpitandro ny filaminana ety an-tanety ny lalana nizoran'ireo dahalo sy ireo omby halatra no ho asan'io vorom-by io. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Mandroseza (nitranga in-1) : FTA Foot Anjanahary # AS Tafaray Mandroseza. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
avoakan' (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
elaela (nitranga in-1) : Toa elaela izay tsy nandraisan'i Madagasikara lalao baolina kitra iraisam-pirenena izay, na nandrenesan'ny ekipantsika tany Afrika tany. (Baolina mamono tena)
nanana (nitranga in-1) : Noho ny Rosiana maro mampiasa fakantsary fafana fanaraha-maso ao amin'ny fiarakodiany (noho ny antony fiantohana amin'ny ankapobeny), dia maro ihany koa no nanana mivantana tamin'ny fianjeran'ny taikintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
iainan' (nitranga in-1) : Fotoana hiresahana sy hijerena ifotony ny tena zava-misy marina iainan'ity taranja be mpankafy indrindra maneran-tany ity ny fiverenan'ireo klioba malagasy indray eo amin'ny fifaninanana afrikanina, efa ho herintaona aty aoriana. (Baolina mamono tena)
Serge (nitranga in-2) : Tokony hiainga any ifotony ny famolavolana ny Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV, raha ny soson-kevitra avy amin' ireo mpikambana eo ani-von'ny sehatra misahana ny fiahiana ny fampandrosoana sy ny etika (cde) izay tarihin' i Serge Zafimahova. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
Itaosy (nitranga in-1) : Nihotsahan'ny trano > Vehivavy iray no maty nihotsahan'ny trano tetsy Beravina Itaosy, omaly tolakandro. (Tapatapany)
Ambatovy (nitranga in-2) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
ekipa (nitranga in-2) : Raha ny fitsipika avy any amin'ny Caf dia tsy maintsy mandeha fiaramanidina ny ekipa manafika raha mihoatra ny 200 km misy ny seranam- piaramanidina iraisam-pirenena ny kianja hilalao- vana. (Tontolo iainana – Nanao modely amin’ ny fambolen-kazo ny mpiasan’ny Cua)
Zafimahova (nitranga in-1) : Tokony hiainga any ifotony ny famolavolana ny Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV, raha ny soson-kevitra avy amin' ireo mpikambana eo ani-von'ny sehatra misahana ny fiahiana ny fampandrosoana sy ny etika (cde) izay tarihin' i Serge Zafimahova. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
hitadiavana (nitranga in-1) : Ho fisorohana ny fifanolanana toy ireny dia nisy, omaly, ny fihaonana teo amin'ny sekretera jeneralin'ny minisiteran'ny Kolontsaina sy ny vakoka tamin'ireo mpikaroka eny amin'ny oniversite, indrindra ny ao amin'ny sampana siansa momba ny tany, mba hitadiavana fomba fiasa mahakasika ny fikarohana ireo vakoka any ambanin' ny tany. (Fikarohana – Hatsangana ny komity momba ireo vakoka ambanin’ny tany)
Randrianatoandro (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina/Haja Randrianatoandro. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Mickael (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
суров (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
mampaneno (nitranga in-1) : Tsy mba indray mandeha ihany no ahitana izany isan'andro eny an-dalambe ao afovoan-tanàna ao fa toa mifaninana mihitsy ry zareo tompon' andraikitra ambony mampaneno anjomara. (Sarotim-boninahitra)
Domà (nitranga in-1) : Ao anatin'ny fanaovana sangisangy zary tenany amin'ny volavolan-dalàna Rosiana handrara ny ”fampielezan-kevitra fiarahan'olon-droa mitovy fananahana,” misy ireo mpisera Twitter mampiely [ru] vaovao tsy izy fa handany ny “fandrarana ny firesahana tainkintana” ny Domà, tahaka ny te-hiteny fa tsy mitombina tahaka ny fanaovana ho tsy ara-dalàna ny loza voajanahary ny fanoheran'ny governemanta ny pelaka. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nampitahaina (nitranga in-1) : Ny tainkintan'i Chelyabinsk nampitahaina tamin'ny lalao malazan'ny Angry Birds. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
nampalaza (nitranga in-1) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Fandrasaina (nitranga in-1) : Fandrasaina anjara sisa ny antsika no zava-dehibe fa toa tsy antenaina ho tody hatraiza ireo solontena malagasy ireo. (Baolina mamono tena)
1983 (nitranga in-1) : Ny taona 1983 no nanombohan' ny sehatra raha dimy taona talohan'io no nijoroan'ny sekoly. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
Hotel (nitranga in-1) : MAFANAFANA
Efitrano (nitranga in-2) : Efitrano fianarana 34 eo anivon'ny Epp Ampasimbe Vohitranivona, niampy toeram-pitsaboana telo ahitana trano fivoahana sy toerana fakàna rano no an-dalam-panarenana ankehitriny. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
Anosy (nitranga in-1) : omaly no nivory tany Fia- narantsoa nampahafantatra ny kandidà hotohanany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena ireo zanaky ny faritra Atsimo avy any Matsiatra ambony, Atsimo atsinanana, Vatovavy Fitovinany , Anosy ary i Menabe. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
hijerena (nitranga in-1) : Fotoana hiresahana sy hijerena ifotony ny tena zava-misy marina iainan'ity taranja be mpankafy indrindra maneran-tany ity ny fiverenan'ireo klioba malagasy indray eo amin'ny fifaninanana afrikanina, efa ho herintaona aty aoriana. (Baolina mamono tena)
Rabemananjara (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
Nihotsahan' (nitranga in-1) : Nihotsahan'ny trano > Vehivavy iray no maty nihotsahan'ny trano tetsy Beravina Itaosy, omaly tolakandro. (Tapatapany)
twitter (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
Edgard (nitranga in-2) : sady fanentanana ny olona no fiarovana ny tontolo iainana izao fihetsika asehon'ny Pds Edgard Razafindravahy izao
Randrianandraina (nitranga in-1) : «Hampitoviana amin'ireny fifaninanana iraisam-pirenena ireny izy ity, ka ny maraina no hanaovana ny dingan'ny fifanintsanana raha ny hariva kosa no hanatontosana ireo dingan'ny famaranana», hoy i Richard Randrianandraina, filohan'ny federasiona malagasin'ny lomano. (Lomano dobo 25M – Miandrandra mpilomano 300 ny fifaninanam-pirenena)
Jaytaxx (nitranga in-1) : Isan'ireo hahazo ny amboarany amin'izany ry Olivier sy Haingo (Rallye), Teddy Rahamefy (Slalom), Tahiana Rasolojaona na Jaytaxx (Run), Tida Claudio (Moto Cross) ary Mickael Louvel (Karting). (Fanatanjahantena mekanika – Omem-boninahitra eny Ivato ireo tompondaka 2012)
Jean (nitranga in-2) : Nampiato ny minisitry ny Rano Reboza Julien tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko Psdum intsony ireo mpikatroka politika sasany miara-dia amin'i Lahini-riko Jean, izay ao anatin' ity antoko ity ihany. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Ankady (nitranga in-1) : Lascar Ambohitrakely # FC Ankady. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
niantefan' (nitranga in-1) : “Nomena safidy izy ireo na hiandry ny sidina mankany Mahajanga rahampitso alahady na handeha fiarakodia, dia ity farany no niantefan'ny safidiny”, araka ny nambaran'i Stanislas Rakotomalala, sekretera jeneralin'ny federasiona malagasin' ny baolina kitra (Fmf). (Baolina kitra – Handeha taksiborosy mankany Mahajanga ny Mbabane avy any Swaziland)
asehon' (nitranga in-1) : sady fanentanana ny olona no fiarovana ny tontolo iainana izao fihetsika asehon'ny Pds Edgard Razafindravahy izao
Tsitohery (nitranga in-1) : Notanterahina omaly teny amin'ny foiben- toeran'ny Telma teny Alarobia ny fanolorana ny loka ho an-dRavelonarivo Tsitohery sy Randrianarijaona Anjasoa, izay nampiseho sary nankafizin'ny mpitsidika ny kaonty Facebook-n' ny ny Telma. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
Twitter (nitranga in-2) : Noho ny fahatakarana ny natioran'ilay sombin-tantara sy ny fandehan'ny resaka, misy ny mpisera Twitter manely ny fomba filaza ho tahaka izao:
hahery (nitranga in-1) : Mety hahery ity andian-drahona io raha mivadika rivo-doza, porofon'izany ny fiantraikany sahady eto amintsika amin'izao. (Toetr’andro – Efa nisy faritra nahazo fampitandremana)
Pascal (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
namaky (nitranga in-1) : ru fa misy ny mponina sasany ao Chelyabinsk no namaky ny varavarany mba hanoloan'ny fanjakana izany satria hoe tra-boinan'ny tainkintana. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Pussy (nitranga in-3) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
hiakaran' (nitranga in-1) : Fa tsy latsak'izany koa ny hiakaran'ireo tanora zokiny na veteran an-tsehatra. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Lycée (nitranga in-2) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
Andriantsiferanarivo (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 16 febroary: CHALLENGER 1 # TMB2A Ambohimirary (U20 Garcon) JCSA Ambohimanarima # MB2ALL (senior DAME) ACA Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (U20 Fille) AESCOM COMORE # AT2B Andraisoro (U20 Garcon) alahady 17 febroary: TMB2A Ambohimirary # CHALLENGER (U16 Garcon) CHALLENGER # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») BBCM # AT2B Andraisoro (VETERAN) BCS Soamanadrariny # CHALLENGER 2 (U20 Garcon) T T S Ambohimanarina # AT2B Andraisoro (Senior HOMME »A.... (CFP Ampasampito – Maro ny vehivavy miofana ho mpiasan’ ny printy)
nampiseho (nitranga in-1) : Notanterahina omaly teny amin'ny foiben- toeran'ny Telma teny Alarobia ny fanolorana ny loka ho an-dRavelonarivo Tsitohery sy Randrianarijaona Anjasoa, izay nampiseho sary nankafizin'ny mpitsidika ny kaonty Facebook-n' ny ny Telma. (Fiainana « Fetin’ny mpifankatia » – Niantefan’ny maro ny sarin’ i Tsitohery sy Anjasoa)
noraisy (nitranga in-1) : Ny fananan'ity farany traikefa amin'ny fanorenana tetikasa ahafahana mampandroso ireo faritra ireo no anton'ity fanapahan-kevitra noraisin' ireo zanaky ny faritra Atsimo ity. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
dratsy (nitranga in-1) : « Afaka mitifitra ihany anefa ny olona ao anatiny, raha tena voamarina fa olon- dratsy ireo olona hitany avy eny ambony. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
hampiharina (nitranga in-1) : Ireto farany izay mihevitra fa tokony hiorina amin'ny soson-kevitra avy amin'ireo Filoham-pokontany sy ny Lehiben'ny distrika ny fandra- fetana ny Lalàm-panorenana hampiharina amin'ny Repo-blika faha-IV. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
Camille (nitranga in-1) : Nilaza ny mbola fahavo-nonany handray andrai-kitra eo amin'ny fitantanana ny firenena ny Prai-minisitra teo aloha, ny jeneraly Camille Vital. (Sombiny)
solfezy (nitranga in-1) : Ao anatin'izay fanamarihana izay dia miantso ireo mpianatra teo aloha, ireo mpitrandraka sy mpankafy mozika hafa, mamaky naoty sy solfezy ary ireo mpampianatra mozika… ny CRM. (Fampianarana mozika – Feno 30 taona ny seho fanaon-dry Ratefy)
mpilalaony (nitranga in-2) : Mampalahelo fa ireo mpilalao vahiny, eoropeanina sy amerikanina tatsimo ary sangasangany amin'ny baolina kitra afrikniana indray no hain'ireo mpitia baolina kitra tsianjery noho ireo mpilalaony eto an-tanindrazana. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
Itasy (nitranga in-1) : Mpamaky trano voasambotra > Dimy lahy tamin'ireo 11 nana-fika trano iray tany Soa-vinandriana Itasy no voasambotry ny zandary ny alakamisy teo niaraka tamin'ny basy vita gasy roa. (Tapatapany)
namboamboarina (nitranga in-1) : Ankoatra izany rehetra izany, nampiasa dia nampiasa ny dikantsarin'ny Adobe photoshop (mety ho nopiratena) ny mpiseran'ny RuNet ary namorona sary namboamboarina maro, na “fotozhaba” (ara-bakinteny “sary-sahona”) esoeson-tsarin'ny tainkintana nandritra ny famakivakiany ny lanitr'i Chelyabinsk. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Rasaony (nitranga in-1) : « Ho tonga hilalao ao amin'ny ekipan'ny Bbcm mihitsy ny filohan'ny Federasiona, Ramaroson Jean Michel, na i Mika izay mpilalaony, hihaona amin'ny tanora zokiny ao aminay », hoy Rasaony Pascal, filoha lefitry ny AT2B. (Fety de basikety e! – Lalao goavana ny an’ ny TTS Ambohimanarina sy AT2B Andraisoro)
bilaogera (nitranga in-1) : Anna Veduta, sekretera mpampita vaovaon'ilay bilaogera miady amin'ny kolikoly Alexey Navalny, namoaka indray ny e-karatra avy amin'i Navalny, izay mivaky toy izao [ru]:
космоса (nitranga in-1) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
Vladimir (nitranga in-1) : Misy ny sasany amin'izy ireny no tsy miresaka politika mihitsy (tahaka ilay fampihomehezana fa mitovy amin'ny Angry Birds ilay tainkintana na avy amin'ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 1998 mitondra ny lohateny hoe Armageddon), ary ny hafa manala azy amin'i Vladimir Putin (sy ny machismo nampalaza azy) ary nisy tonga hatrany amin'ny mpikambana ao amin'ny Pussy Riot antsoina hoe Nadezhda Tolokonnikova aza. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
mampitamberina (nitranga in-1) : Raha ny fanaovana sary nataon-tanana ho famonjena voina no fanao mahazatra manoloana ny voina, dia hita fa mampitamberina ny vazivazy fanaon'ny Rosiana kosa ny tainkintana nianjera tao Chelyabinsk, noho ny lazan'ity ambonivohitra ity sy ny fanesoana azy fa fadiranovana sy mahantra ao amin'ny firenena. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
efitrano (nitranga in-1) : « Ny 12 amin'ireo efitrano fianarana sisa no hofaranana amin'ny faran'ity volana febroary ity. (Fanampian’ny BAD – Nahazo fanampiana iray tapitrisa dolara i Brickaville)
hifehy (nitranga in-3) : Tokony hiainga any ifotony ny famolavolana ny Lalàm-panorenana hifehy ny Repoblika faha-IV, raha ny soson-kevitra avy amin' ireo mpikambana eo ani-von'ny sehatra misahana ny fiahiana ny fampandrosoana sy ny etika (cde) izay tarihin' i Serge Zafimahova. (Serge zafimahova – «Lalàm-panorena miainga eny ifotony no tokony hapetraka»)
Nandika (nitranga in-1) : Mpanoratra Kevin Rothrock · Nandika Jentilisa
Duchesne (nitranga in-1) : Pacific Fort Duchesne # Pro Antsahameva. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
Moramanga (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
hitantana (nitranga in-2) : Io izany no hany kandidà mirotsaka hitantana ny toeran'ny filoha hofidiana anio eny amin'ny ANS Ampefiloha. (Tapatapany)
biraon' (nitranga in-2) : Efa nota-nana eny amin'ny biraon' ny zandary etsy Fiada-nana ity lehilahy mpisan- doka ity. (Ady amin’ny halatr’omby – Efa tonga any Betroka ny helikoptera hanenjika dahalo)
Suprême (nitranga in-2) : 11 Suprême Ankatso # Frero Ambohipo. (Kitra an’olona fito – Andro farany an’ny «Mazaka»)
ahafahako (nitranga in-1) : «Hatreto aloha dia mbola tsy nanaiky io fangatahana io ny tenako fa mbola hijery ny fomba ahafahako manatanteraka ny hetahetan'izy ireo», araka ny nomarihin'ity Filoha tale jeneralin'ny Papmad ity, omaly. (Fifidianana – Manankim-po amin’ i Patrick Rajaonary ny any Atsimo)
настолько (nitranga in-2) : Misy, ohatra, kaonty sandoky ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana nisioka hoe [ru]:
teto (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
hamonjy (nitranga in-1) : ny TCO (maitso) no efa miandry ny Mbabane Swazis ao Boeny
Nasha (nitranga in-1) : Ny hatsikana momba an'i Chelyabinsk [ru] no manjaka indrindra eo amin'ny tontolon'ny hatsika Rosiana—hita ao amin'ny sombim-pandaharan'i Ivan Dulin ao amin'ny fahitalavitra Nasha Rosia [ru]. (Ho an'ny Sariitatra Rosiana, Mirotsaka ny Tainkintana)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/16_Febroary_2013&oldid=9706934"
Voaova farany tamin'ny 16 Febroary 2013 amin'ny 22:02 ity pejy ity.